N'oge na-adịbeghị anya, ọ dị ka Bitcoin nọ na nsogbu. Agbanyeghị na ọnụego Bitcoin yiri ka ọ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, mkpuchi a anọwo na oge nkwado na izu abụọ gara aga, ka m mechara kụrụ nnukwu $ 7,470. Na-efegharị n'etiti mpaghara dị elu nke $ 6,000 na mpaghara dị ala nke $ 7,000. Ne ...
N'October 31, 2008, NJ nke Satoshi Nakamoto bịanyere aka doziri nsogbu a site na akwụkwọ peeji 9 maka otu esi akwụ m ụgwọ na netwọkụ na-enweghị aha na nke ọma. Anyị maara ugbu a na nwoke ahụ dị omimi a maara dị ka Satoshi Nakamoto na ibe itoolu ahụ sitere na obere ikuku nke ya na ụgwọ 100 ...
N'ihe dị ka narị afọ asaa tupu Sweden ewepụta akwụkwọ izizi mbụ nke Europe na 1661, China amalitela ịmụ maka etu esi belata ibu arọ nke ndị mmadụ na-ebu mkpụrụ ego ọla kọpa. Mkpụrụ ego ndị a na-eme ka ndụ sie ike: ọ dị arọ ma ọ na-eme njem dị egwu. Mgbe e mesịrị, ndị ahịa ahụ kpebiri itinye ego ndị a na ...
btc akpa, antbox akpa, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, antminer akpa, obere akpa, mkpuchi crypto asic,